Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Nyamavhuvhu 9, 2018
Gweta rine mukurumbira munyika, uye vari nhengo yeMDC Alliance, VaTendai Biti, vanomiswa mudare redzimhosva zvichitevera kudzoserwa kuZimbabwe nevakuru vakuru vekuZambia kwavaitsvaka hupoteri.
Gwera rine mukurumbira munyika, Amai Beatrice Mtetwa, vanonyorera mapurisa vachiaudza kuti zvaakaita pana VaBiti zvinotyora mitemo yepasi rose vachiti mapurisa emuZimbabwe akapamba VaBiti sezvo vari kufanirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro muZambia pamusoro penyaya yavakasvitsa kunyika iyi yekuti vapihwe hupoteri munyika iyi.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pedanho rakatorwa neZambia rekuisa VaBiti mumukanwa mamupere umo vaitiza vachida kutsvaka hupoteri muZambia, uye mabatirwo ari kuitwa nyaya yavo nehurumende.
Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rokomekedza Zambia kuti iferefete kudzoserwa kuZimbabwe kwaitwa VaBiti mushure mekunge vazvipira kuhurumende yeZambia vachiti vari kutsvaga hupoteri sezvo zvaitwa naZambia zvichityora mitemo yepasi rose.
Muchirongwa cheLiveTalk -Women’s RoundTable na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.